Ogaden News Agency (ONA) – Xabashi & dameerba dariskooda ayay cunaan – Cabdi wuu ka aargoostay, Ilaahayna meel wanaagsan ayuu la doonay
Xabashi & dameerba dariskooda ayay cunaan – Cabdi wuu ka aargoostay, Ilaahayna meel wanaagsan ayuu la doonay
Waxaan halkan idiinku soo gudbin qiso xanuun badan oo qabsatay muwaadin Soomaalida Ogaadeenya ah. Cabdi wuxuu ku dhashay gobolka shabeele laakiin reerkooda waxay ka soo qaxeen Ogaadeenya dagaalkii 1977. Cabdi & reerkoodii waxay kusoo noqdeen Ogaadeenya 1991 kadib dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya.
Cabdi reerkooda waxay yimaadeen gobolka Shabeele oo ahaa meesha ay kasoo jeedeen, Cabdi oo ahaa wiil ku koray xoriyad reer magaalna ahaa wuxuu isla markii uu yimid caasimada Shabeele ee Godey isku dayay in uu magaalada la qabsado, nasiib daro Ogaadeenya ma aha meel si xor ah loo shaqaysan karo ama loo ogol yahay in wax horumar ah dadku sameeyaan, labada shaqo ee ogaadeenya ugu badan waa jaajuusnimo & turjibaan si ciidanka Ogaadeenya ula socdaan in dadku wax gumeysiga ka hor iman ku dhaqaaqaan & inkale.
Cabdi wuxuu bartay luqada amxaariga ciidankii gumeysigana waxay iska barteen saraakiil laakiin wax shaqo ah oo dhab ah ma uusan helin. Markii uu mudo magaaladii joogay ayaa waxaa uu arkey in dadka ay ehelka yihiin u arkeen sida nin madax ah oo ay tixgelin kusiiyeen xiriirkiisa saraakisha, arintaas oo Cabdi aad ula yaabay waayo wax uu saraakisha agtooda ka ahaa ma jirin, laakiin markii uu arkey dadkii degaanka ee xigtadiisa iney kuleeyihiin nimanka noogu jir sharkooda aad naga difaacdid qabiilada kalana yayna ciidankaas nagu xasuuqin ayuu bilaabay inuu xiriirkii sii wado.
Waxaa dhacday in ciidanka wayaanaha ubaahadeen inay weerar ku qaadaan degmada Luuq ee Soomaaliya oo wakhtigaas u ahayd saldhig ururkii Al-itaxaadka oo colaadu dhexmartay waagaa Itoobiya. Cabdi wuxuu kamid noqday dhalintii loo kaxaystay in turjibaan u kala noqdaan dadka degaanka Gedo & ciidamada Itoobiya.
Cabdi maadaama ciidanka Soomaaliya u socdo goob dagaalna meesha tahay wuxuu filyay in Qori loo dhiibi doono si hadii xaalka xumaado isku difaaco, nasiib daro waxaa Cabdi lagula kacay wax uu nacaladay dhamaan dadkii hoosaasiyay ee kula taliyay in uu amxaarada la shaqeeyo.
Ciidankii gumeysiga waxay Cabdi ku wargaliyeen in uu rasaasta u xanbaaro wax Qori ahna aan loo dhiibeynin. Cabdi oo laba kala daran mid dooro qabsatay ayaa wuxuu ku qasbanaaday in ;
✔In uu diido oo la dilo ama .
✔In uu sida dameerkii xambaarto rasaasta pkm oo badan.
Cabdi wuxuu yaqiinsadey in uuna kala doorasho lahayn oo uu rasaasta qaado inta uu fursad uu ku baxsan ka helayo. Cabdi oo kasheekeyn wuxuu yidhi; “Dhacdadan waxay ahayd midii ugu xanuun badneyd ee abid isoo marta.”
Cabdi oo sheekadii sii wata wuxuu sheegay in waxa ugu xanuunka badnaa ee qabsaday mudadii uu gumeysiga la socday ay ahayd; marka meel la dago oo ciidanka Itoobiya cunto ma wataane ay buskudkii la soo kala baxaan Cabdina gaajada iyo daalka u dheertahay xamaalkii, in marka buskudka cunayaan aan isaga waxba laga siin. Marka waxay cuni karaan cunaan ayaa waxaa la dhahaa magaajaa waryaa ku haysa? Haa markuu dhaho buskud badan lama siiyee waxaa loo soo bixiya xabad buskud ah. Cabdi wuxuu yidhi; “Marka aan gacanta taago inta la’igu xuuxiyo ayaa marka dambe la’igu soo halgaadaa. Marmarka qaar intay hawada qaadato ayay ciida iga gashaa oon ka jafjaftaa, marmarka qaarna inta sidii diyaaradii waraaqda laga sameyn jiray buskudka hawadu u ciyaarsiiso ayay isha igaga dhacdaa.”
Cabdi oo kasheekeyn wuxuu intaa ku daray; “Marka buskudka isha iga dhaco ama daanka waxaad moodaysay ama iiga fududaa in baasuuke igu dhaco xanuunka & cadhada ihaysay.”
Cabdi wuxuu Ogaadeenya kusoo noqday Isagoo leh ilaahayoow mar gobolkeygii Shabeele igee si aan uga aargoosto ciidamada Itoobiya, wuuna kaga dhabeeyay goaankaas. Markuu sidaas Ogaadeenya ugu soo noqdayba wuxuu bilaabay in uu ku biiro Naftood-hurayaashii JWXO ee aagaa.
Cabdi wuxuu laayay maxaysato badan oo shacabka xasuuqi jiray, aakhirkiina Ilaahay wuxuu u qoray In uu helo shahiidnimo oo kamid noqdo kuwa hooska Alle harsada maalinka aan hoos kale jirin. Cabdi intuuna shahiidin wuxuu qisadiisa oo dhameystiran kusoo daabacay wargeys si dhalinta Ogaadeenya ee ka dambeysa ugu khaldamin in gumeysiga naxariis laawa ah ku aaminaan naftooda ama sharaftooda.
Waxaa wargeyskaas akhriyay : khaliif.